Nzira yekutsvaga maAmerica nzira dzekutengesa zvakanakisisa sei?
Munhu wose anotengesa panzvimbo iyoyo yakawanda yemusika anofanira kuziva kuti angatsvaga Amazon pamusoro pezvinhu zvinotengesa, mazano, uyewo kutarisa mitengo uye kuchengeta mamwe mazano akachenjera ane basa rinoratidzwa ipapo. Asi nzira yekuwana nayo mikana yakarurama uye kuziva mhando dzakanakisisa dzemakwikwi ako usingashandisi nguva yakawandisa nekuedza? Sezvo pane zvakawanda zvekare zvaunogona kuita iwe uye zvinhu zvakawanda zvekugadzirisa pamwe chete neyakagadzirwa nemakambani uye urongwa hwekutengesa. Nenzira, hapana kushayikwa kwezvinhu zvekutsvaga uye software yekutsvaga Amazon inonyanya kutsvaga kutsvaga - kutanga kubva mukugadzira mhizha, mutengo wekutengesa, mutemo wekutumira, kune vatengi vemhinduro, mazwi ekutsvakurudza mashoko, uyewo nzira dzakanakisisa dzekugadzirwa kwezvigadzirwa zvakagadzirwa nepamusoro vanobudirira ecommerce merchant - ludoteche salernos. Sezvandakareva, pane makumi emamiriyoni evanhu vakasiyana-siyana vabatsiri veIndaneti vanowanika mukuzarura. Asi pasi apa ndichaenda kukuratidzai zvitatu zvezvigadzirwa zvangu zvakanakisisa-zvinoitwa. Ini pachake ndakashandisa zvinotevera zvinotevera kutsvaga mikana yekutengesa ma Amazon - Jungle Scout, AMZ Tracker, uye Nharaunda - chimwe nechimwe chazvo chakagadziridzwa zvakanaka, saka regai tione muchidimbu pasi apa.
Chimbo chekutanga chekutsvaga Amazon pamusoro pekutengesa nzira ndecheJungle Scout. Ndinokurudzira kuti ndichiedze pamberi pezvimwe zvose kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvii zvinowanzodiwa kuAmazon, uye ndezvipi zvinowanikwa zvino kune vatengesi varipo. Kutaura zvazviri, Jungle Scout inogamuchirwa nevatengesi vakawanda vanobudirira muAmazambique semhando yakanakisisa ye "data-driven" tsvakurudzo yekutsvakurudza. Iyi sarudzo inotaura pachayo, zvichiita kuti zvive zvechokwadi kukosha kushandiswa kana kuti zvishoma kana kuedza kwako kutanga. Pano pane mamwe mazano anobatsira anouya nechokushandisa paIndaneti: database yakawanda yepamusoro yemetrics (zvose iwe pachako, uye makwikwi ako), inobatsira kuzarura mikana yakavanzika uye kuderera kunokwikwidza mitsva yemichero, niche hunter kukupa mukana pasi pemakwikwi echokwadi, uye zvimwe zvakasiyana zvakasiyana zvinodiwa kuti zvibudirire kupinda mumusika mutsva.
Chirongwa ichi chinoratidza mitsipa yakasimba kwazvo paunoda kutsvaga Amazon mutengesi keywords, yakashandiswa kune yakabudirira zvakagadzirwa nemabhuku. Panguva imwecheteyo, ichi chinhu chikuru chinotsvakurudza kutsvaga chinogona kukubatsira nehumwe ruzivo rwakakosha pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga kwemabhuku uye kwenguva refu-muswe keyword zvinyorwa zvinoshandiswa nevashandi vanoshingaira kuAmazon kakawanda. Uyezve, AMZ tracker ine mu-yakavaka SEO sangano kuratidza kuti chii chingaitwa nekutengeserana kwekugadzirwa kwekugadzirwa kwehuwandu hwehuwandu hwemigumisiro.
Zvakafanana neshoko rinokosha rekare, Chikoro chinosanganisa kutsvakurudza kwemashoko nemakwikwi ekugadzirwa kwezvinhu. Pakati pezvimwe zviitiko, mubatsiri uyu wepaIndaneti anonyanya kunakira kana iri kuuya kuPPC campaign optimization, kutsvaga mikana mitsva yakakosha, pamwe nekugadzirisa kutaridzika kwehuwandu nezvose-zvakapoteredza mazano ekudhindwa kuti uone mufananidzo mukuru wekutengesa kwako kwemafambisi neFBA mari . Ndinokurudzira kushandisa shanduro iyi kuti ubatanidze pamwe chete zvakanakisisa zvitsva zvevatengesi vemakambani - kuchinja iwe pachako kutengesa nzira inoshanda.